Subaru fito be izao sy Mitsubishi telo no handray ny fiaingana amin’izany fifaninanana manamory fiarakodia izany.
Tamin’ity no betsaka indrindra ireo fiarakodia mitarika amina kodiarana efatra (4 roues motrice) hatramin’izay nisian’ny fifaninanana ho an’ny Rallye. Mbola tsy tafiditra ao anatin’izany aza ry Joda sy Rila ary i Freddy sy Yachine, izay manomana ny fiadiana ny ho tompondakan’Afrika ato ho ato.
Banga kosa ny toerana ho an-dry Sissi sy ry Kopela, izay isan’ireo mpiangaly Subaru. « Tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena ho an’ny Rallye farany teo no nahitana fiarakodia toy itony nandray anjara betsaka », hoy i Jeannot Rabekoto, filohan’ny klioba Asacm.
Isan’ireo kalaza hiverina hifaninanana indray i Laza sy Jean Philippe, izay hitondra ny Mitsubishi Evo 9. Mpifanandrina akaiky aminy eo amin’ilay karazana fiarakodia i Mathieu sy i Andry Tahiana, izay hiova fiarakodia amin’ity, rehefa avy nifandimby tamin’ny P 205 sy Subaru hatramin’izay.
Eo ihany koa i Irina sy Berthin, izay efa nanandrakandrana ihany tamin’ny taon-dasa tamin’ny fitondrana ny Mitsubishi Evo 10, saingy amin’ity izy ireo vao tena hanezaka mafy.
Eo amin’ny Subaru indray dia hanamarika ny fifaninanana ny fiverenan-dry Hery Be sy Fafah amin’ny Subaru. Eo ihany koa ry Nashemy sy Laurent, izay efa miha zatra Subaru. Hiverina ihany koa ry Mamy kely amin’ny anarana hafakely, Hubert, amin’ny Subaru.
Mahatratra 29 ireo fiarakodia rehetra handray ny fiaingana amin’izao andiany voalohany izao.